Mayelana NATHI - Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.
I-Hebei Spring-Tex I / E Co, Ltd.yinkampani ekhethekile ekukhiqizweni nasekuthekelweni kwemikhiqizo yendwangu yasehhotela. Abasebenzi bethu abakhulu banokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20 emkhakheni wezindwangu zasekhaya. Ingqondo yabo yokudala nokuzikhandla kubenza basebenze ngokuzikhandla kulo mkhakha.
Sinesisekelo sokukhiqiza esizinzile futhi imikhiqizo yethu ithunyelwa kakhulu e-USA, Canada, Australia, Europe nase Middle East. Sihambisana ngokuqinile nomgomo: Ikhwalithi iyisisekelo seNkampani, Ukuzibophezela kungukuphila kwenkampani. Sibheka izidingo zamakhasimende njengokubaluleke kakhulu, futhi njalo sethula imikhiqizo ebuyekeziwe kumakhasimende ahlobene.
Siyakwamukela amakhasimende avela kuwo wonke umhlaba ukusungula ubudlelwane bebhizinisi besikhathi eside nathi futhi silethelana impumelelo nenzuzo. Silangazelela ukwanda kwebhizinisi lethu namakhasimende avela kwezinye izifunda eziningi zomhlaba.
Yonke imikhiqizo yethu kulindeleke ukuthi yenze impilo yakho ibe ntofontofo.